कसरी भर्ने शिवम् सिमेन्टको आइपीओ, कति कित्तासम्म भर्न पाइन्छ ? « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
काठमाडौं । शिवम् सिमेन्टको सोमबारदेखि आइपीओ खुल्ला भएको छ । शिवमले सर्वसाधारणलाई प्रिमियम भाउमा आइपीओ बिक्रीमा ल्याएको हो । यसमा फागुन ९ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । तर यस अवधिमा सबै सेयर नबिकेमा चैत ५ गतेसम्म भर्न पाइनेछ । संस्थागत लगानीकर्ताले पनि सोमबारदेखि नै यो आइपीओ भर्न सक्नेछन् ।
जसमा सामुहिक लगानी कोषहरु र शिवम् सिमेन्टका कर्मचारीका लागि ६० हजार कित्ता, सर्वसाधारणलाइ ४१ लाख २० हजार कित्ता र मकवानपुरबासिका लागि ५ लाख ७९ हजार ६४० कित्ता शेयर बिक्री खुल्ला भएको हो।
सर्वसाधारणले प्रतिकित्ता ३०० रुपैयाँको दरमा ४१ लाख २० हजार कित्ताका लागि आवेदन दिन पाउने छन् । कुल ४४ लाख कित्तामध्ये २ लाख २० हजार कित्ता कम्पनीका कर्मचारीलाई छुट्याइएको छ । यस्तै, सामूहिक लगानी कोषलाई पनि २ लाख २० हजार कित्ता नै छुट्याइएकोमा ६० हजार कित्तामात्र माग भएपछि बाँकी १ लाख ८० हजार कित्ता पनि सर्वसाधारणलाई नै थप गरी बिक्री खुला गरिएको हो ।
आयोजना प्रभावित स्थानीयले पनि अब प्रतिकित्ता २०० रुपैयाँमा आइपीओ किन्न सक्नेछन् । यसअघि स्थानीयलाई ३०० रुपैयाँको दरमा ८ लाख ८० हजार कित्ता आइपीओ जारी गर्दा २ लाख २४० कित्ता मात्र बिकेको थियो ।
स्थानीयले पनि फागुन ६ सोमबारदेखि ९ गतेसम्म आवेदन दिन पाउनेछन् । सर्वसाधारणले न्यूनतम ५० देखि अधिकतम ४४ लाख कित्तासम्म र स्थानीय बासिन्दाले न्यूनतम ५० देखि अधिकतम ५ लाख ७९ हजार ६४० कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । सी–आस्वाबाट आवेदन दिन पाइनेछ ।
सो शेयरधनीलाई स्थानीयलाई छुट्टाएर बिक्री हुन बाँकी शेयरमध्ये थप १ लाख १२० कित्ता थप शेयर उपलब्ध गराएर बाँकी रहने ५ लाख ७९ हजार ६४० कित्ता आईपिओ शेयरमा मकवानपुरबासीले फेरि आवेदन गर्न सक्नेछन्।